एउटा कारुणिक दुखान्त पोहोर बाबुलाई दागबत्ती यसपाली आमालाई - पिटि अनलाईन न्यूज
एउटा कारुणिक दुखान्त पोहोर बाबुलाई दागबत्ती यसपाली आमालाई
२४ आश्विन, २०७८ ०८:२०
शास्त्रअनुसार १६ संस्कारमध्ये अन्तिम संस्कारको तयारी भइरहेको छ।श्मशान घाटमा दाउराको चाङ लगाएर मलामीहरूले चिता बनाए। परिवारका सदस्यबाट चिता बनाउने जमिन किन्ने काम भयो। परिवारका सदस्यहरूले अर्थीबाट डोरी फुकाएर शवलाई चितामा सुताए। खरले छोपेर शवका कपडाहरू हटाइयो। मृतकका एक आफन्तले पाँचवटा कौडी र दाम राखे। मृतकलाई स्वर्गमा समेत शीतलता प्राप्त होस् भनेर मुखमा चन्दनको टुक्रा राखियो।
रुबीकी सासू मोहिनीले संरक्षकमा आफ्नो नाम हुनुपर्ने भन्दै अस्पतालमा दबाब दिन थालेपछि विवाद चर्कंदै गएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रणजितकुमार झाले बताए। मोहिनीले वडा कार्यालयमा समेत संरक्षकका लागि सिफारिस गर्न निवेदन दिइन्। अन्ततः सरकारबाट प्राप्त रकमको संरक्षकमा रुबीकै नाम कायम रह्यो।
कुन तत्वले रुबीको मनलाई यस्तो अप्रिय निर्णय लिन उक्सायो वा अरू केही रहस्य छ ? यी प्रश्नहरूले मलामीहरूलाई झस्काइरहेको छ। बुवाको मृत्युपछि दीक्षा र दिव्यंशलाई आमाको एकमात्र सहारा थियो। त्यो सहारा पनि चुडियो। कोसी नदी किनारमा रूबीको चिता जलिरहेको थियो। चितालाई एकटक हेरिरहेका छोरा दिव्यंशको हृदयविदारक अनुहारले मलामीहरूको मन पोलिरहेको थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।